Semalt Inotsanangura Nzira Yokukuvara Nayo Nayo Screen Scraping Tool
. Inotibvumira kutora data inobatsira kubva kune zvakasiyana siyana uye kunobatsira kukura mabhizinesi edu. Kwemakore, web scrapers yakashandiswa kubvisa ruzivo kubva kumapeji akasiyana-siyana ewebhu, mabhuku ezvinyorwa, maforumasi epakombiyuta, mafambisi ekufambisa, zvinyorwa zvemashoko, uye nzvimbo dzekutengesa. Screen Scraping isiri chinhu chitsva, uye iwe haudi chero unyanzvi hwekugadzirira kuti ubatsirwe nayo. Ichi chishandiso chakanaka kune mabhizimisi maviri uye freelancers sezvo zvingaita kuti basa rako rive nyore uye nekukurumidza. Zvinhu zvikuru zveScreen Scraping tool zvinotaurwa pasi apa.
1. Inofanidza mitengo nyore nyore
ne Screen Scraping tool, iwe unogona kuenzanisa zviri nyore mutengo wemamwe mawebhusayithi ezvitoro zvakadai seAmazon uye eBay. Iko inounganidza, inoronga uye inocherechedza unhu hwe data yako kana ichibviswa. Mukuwedzera, chigadziri ichi chinogadzirisa uye chinogadzirisa zvinhu zvose zviduku uye zvinokubatsira kuti uwane ruzivo rwekutengesa kwezvinhu zvakasiyana-siyana.
Vachigadziri uye vanogadziridza vanowanzonyunyuti kuti svondo rezvisikwa kugadzira zvishandiso hazvikwanisi kutsvaga ruzivo kubva kumajw.org. Kusiyana neyekunyora kwekushandisa, Screen Scraping tool inotora data inobatsira kubva pa Facebook ne Twitter uye inoronga nenzira yakatarisa.
3. Inoita kuti kutsvakurudza paIndaneti kuve nyore
Chigadzirwa ichi chakaisvonaka kune vatsvakurudzi, vadzidzisi nevadzidzi nokuti inoparadza data kubva kumagazini eInternet ne eBooks nyore nyore. Iwe unogona kuparadzira zvinyorwa zvewebsite dzekudzidzisa zvakasiyana uye wozvinyora sewe wako. Asi iwe unofanirwa kutarisira mitemo yekodzero uye yekutengeserana apo uchibvisa dhiyabhorosi kubva kune inowanzo. Nenzira yakawanda, chigadzirwa ichi chinobatsira vadzidzi kuwana uye kuronga ruzivo kubva kune nzvimbo dzakasiyana. Inobatsira kuti vagadzirire migove yakarurama uye vanotsvaira kusvika mazana mapeji emashizha muawa.
4. Mushandisi ane simba webhutaneti:
Screen Scraping ndiro chinhu chakakosha pazvinouya pakurondedzera mapeji ewebhu akasiyana. Inotibvumira kutanga vatengesi vakawanda pane imwe nguva, uye hatidi kuongorora zviri kuitika kumashure. Tingazosimbisa deta uye shanduri iyi ichachengetedza ruzivo rwakanyatsotariswa mune dheyo yayo. Mukuwedzera, iwe unogona kuishandisa kuti ukweve mapeji akasiyana siyana ewebhu uye nekudaro uvandudze kushanda kwewebsite yako. Screen Scraping tool yakakura kune webmasters uye inovabatsira kuvandudza injini yekutsvaga nzvimbo dzavo nema blogs.
Nyaya Dzakadzika ne Screen Scraping Tool:
Kuti ugare wakasununguka, heino danho-nhanho tsanangudzo yekutanga sei web scraping nechishamiso ichi:
Nhano 1: Kushandura paScraping Scraping tool in Your Design tab. Ichi chishandiso chichaona chimwe nechimwe chezvinhu nechidimbu chayo chakasiyana.
Nhano 2: Zvakakosha kusarudza nzira yekuchera uye maitiro e data yako. Kazhinji, Screen Scraping tool inopa data mu CSV uye JSON mafomu.
Nhano 3: Kushandura pfuu Ramba uchitanga kupora. Ichi chishandiso chinotanga kuunganidza ruzivo rwauri, urongwa uye ruchinyora mumhando yakakodzera. Usakanganwa kutora danda rakatsvaga ku hard drive yako kuitira kushandiswa kwepaIndaneti Source .